डा.केसी र सरकार बिच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति , आजै अनसन तोडिने • Health News Nepal
डा.केसी र सरकार बिच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति , आजै अनसन तोडिने
काठमाडौं ,२५ असोज २०७७
प्रा डा. गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । अनशन बसेका २७ औं दिनको दिन सहमति भएको हो ।
सहमति भएसँगै डा. केसीले आइतबार बिहान अनशन तोड्ने भएका छन् । बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ता असफल भएपछि सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको गरेको थियो भने डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्य वार्ता टोली बनेको थियो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसी १९ औं पटक अनशन बसेका थिए ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Dr.Govind kc
टोखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक नगद राशि सहित प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पुरुस्कार सहित सम्मानित
असोज ७ गते एकैदिन१८९३ जना डिस्चार्ज हुँदा ११७२ जना संक्रमित थपिए #Covid19